घर हाम्रो नेपाल, Author at USNEPAL NEWS
Posts by घर हाम्रो नेपाल
घर हाम्रो नेपाल
by घर हाम्रो नेपाल	 15:24, May 16, 2016
विराटनगर, ३ जेठ । मोरङको गोविन्दपुर गाविसस्थित एक किराना पसलबाट आज दिउँसो प्रतिबन्धित औषधी कोरेक्स बरामद भएको छ । सो गाविसको खुनियाबारीकी किराना पसल सञ्चालिका रेखाकुमार रहमानी (शर्मा)को पसलबाट १५…
by घर हाम्रो नेपाल	 15:21, May 16, 2016
काठमाडौँ, ३ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउने विषयमा दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संसद्को पूर्ण बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको विषयमा सदस्यको सङ्ख्या…
by घर हाम्रो नेपाल	 15:17, May 16, 2016
काठमाडौँ, ३ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आसपासका महत्वपूर्ण स्थानमा निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । प्रजिअ रामकृष्ण सुवेदीको अध्यक्षतामा आज बसेको जिल्ला…
हाम्रो गाउँको मान्छेले चाँही कहिले पनि सुख पाउदैन कि के हो ?
by घर हाम्रो नेपाल	 11:02, January 24, 2016
खै हाम्रो गाउँमा त एस्तो छ ! केही पनि देख्न पांउदैन । दु:ख गर्नु त्यस्तो मात्रै देख्छ । जहिले पनि काम मात्रै देख्छ हाम्रो त ! हाम्रो गाउँको मान्छेले चाँही…
by घर हाम्रो नेपाल	 20:24, January 19, 2016
हरिस निरौलादेखि कक्रोचसम्म
by घर हाम्रो नेपाल	 07:34, June 4, 2015
सुजन पन्त देशमा जनआन्दोलनको आगो दन्किरहेको थियो,पञ्चायती शासकहरु जनताको आन्दोलनमाथी बर्बर दमनमा उत्रिएका थिए । कुरा २०४६ सालको हो, त्यही साल पुर्वी सोलुखुम्वुको नेचा बतासेमा ‘कक्रोच’ उदाए हरि निरौलाको नाममा…
by घर हाम्रो नेपाल	 23:09, June 3, 2015
गौशाला, २१ जेठ । महोत्तरी प्रहरीले गएराति जिल्लाको धमौरा गाविसबाट हजाराँैको रिचार्ज कार्डसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धमौरा गाविस–८ बस्ने २७ वर्षीय जीतेन्द्रकुमार शर्मा, २५ वर्षीय शनाउल्लाह…
सुजन पन्त यो दुनियाँ कुरै कुराको भण्डार हो, त्यसैले यहाँ अनेक किसिमका कुराहरु आइरहन्छन् । तर, गुलिया कुराको कोरा आदर्शले मात्रै दुनियाँ बदलिँदैन । दुनियाँ बदलिन भनाई र गराइएको तारतम्य…
भूकम्पपीडितका नाममा भएका काम र योजनाको विवरण माग
by घर हाम्रो नेपाल	 21:24, May 18, 2015
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । भूकम्पपीडितका लागि सरकारबाट गरिएका काम र भावी योजनाका सम्बन्धमा तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले माग गरेको छ…
त्रिपाल नपाएपछि अस्थायी टहरा बनाउन जुटे पीडित
by घर हाम्रो नेपाल	 22:47, May 17, 2015
बनेपा, जेठ ४ गते । वर्षाको समय नजिकिँदै जाँदा भूकम्पपीडित भएका परिवारले त्रिपाल नपाएपछि व्यक्तिगत लगानीमा अस्थायी टहरा बनाउन थालेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको कोसीपारिका दुर्गम गाविसका रुपमा मानिने सानो बाङ्थली…